4-Hydroxyquinoline-3-carboxylic အက်ဆစ် (13721-01-2) - APICMO
ထုတ်ကုန်များ > 4-Hydroxyquinoline-3-carboxylic acid (13721-01-2)
, ထုတ်လုပ်ရန် synthesize နှင့် CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအောက်မှာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် 4-Hydroxyquinoline-3-carboxylic အက်ဆစ် (13721-01-2) ၏အမြောက်အမြားထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း
SKU: 13721-01-2 အမျိုးအစား: Heterocycles
4-Hydroxyquinoline-3-carboxylic အက်ဆစ် (13721-01-2) ကဗီဒီယို
4-Hydroxyquinoline-3-carboxylic အက်ဆစ် (13721-01-2) အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
MDL အရေအတွက် MFCD00498984
InChI Key ကို ILNJBIQQAIIMEY-UHFFFAOYSA-N ကို
ဓာတုအမည်သို့မဟုတ်ပစ္စည်း 4-Hydroxyquinoline-3-carboxylic အက်ဆစ်
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံ 20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ crystal-Powder
မော်လီကျူးအလေးချိန် (ဆ / mol) 189.17
အပြုံး C1 = CC ကို = C2C (= C1) ကို C (= အို) ကို C (= CN2) ကို C (= O) အို
အရည်ပျော်မှတ် 267-273 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
Apicmo.com မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင့်မားသောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ CGMP ၏လမ်းညွှန်ချက်များကို အသုံးပြု. 4-Dihydro-4-Oxo-Quinoline-3-Carboxylic အက်ဆစ်တစ်ကျယ်ပြန့်ငွေပမာဏကို synthesize နှင့်ထုတ်လုပ်, ဖွံ့ဖြိုး။ သငျသညျသုတေသနသို့မဟုတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဒီဒြပ်ပေါင်း၏အသေးသို့မဟုတ်အမြောက်အမြားရှာနေရှိမရှိဒီတော့ Apicmo.com အပေါ်ရေတွက်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်းနှီးဖော်ရွေခြင်းနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖောက်သည်စောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့ကဖွင့်ဆက်သွယ်ပါ။ အောက်ကထုတ်ကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များသည်။
အဆိုပါ 4-Hydroxyquinoline-3-carboxylic အက်ဆစ် (13721-01-2) ၏နာမ်
4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic အက်ဆစ်လည်း 4-Quinolone-3-carboxylic အက်ဆစ်သို့မဟုတ် 4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic အက်ဆစ်သို့မဟုတ် 4-Oxo-1,4-dihydroquinoline Carboxylic အက်ဆစ်သို့မဟုတ် 4- အဖြစ်လူသိများသည် OXO-1,4-DIHYDROQUINOLINE-3-cARBOXYLIC ACID သို့မဟုတ် 1,4-Dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic အက်ဆစ်သို့မဟုတ် 1,2-Dihydro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic အက်ဆစ်သို့မဟုတ် 1,4-DIHYDRO-4-OXO-QUINOLINE-3 -CARBOXYLIC ACID သို့မဟုတ် 3-Quinolinecarboxylic အက်ဆစ်သို့မဟုတ် 1,4-dihydro-4-oxo- ။
အဆိုပါ 4-Hydroxyquinoline-3-carboxylic အက်ဆစ် (13721-01-2) ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများ
ဓာတုအမည်: 3-Ethoxycarbonyl-4 (1H) -quinolone
မော်လီကျူး Form ကို: C₁₂H₁₁NO₃
ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: Beige Solid
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 277-279 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
Mol ။ အလေးချိန်: 217.22
သိုလှောင်မှု: ROOM တွင် Temp
ပျော်ဝင်: DMSO (အပူ)
အမျိုးအစား: မွှေးကြိုင်, ဆေးဝါး, intermediate နှင့် Fine ဓာတုပစ္စည်း။
4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic အက်ဆစ်၏ Applications ကို
တုပ်ကွေးရောဂါ endonuclease inhibitor တစ်ဝတ္ထုအဖြစ် Ethyl 4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate အပေါ်ပြုမိသုတေသနတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ သူတို့ကအစဦးနှောက်ဂိဗာမွို့ receptors ၏ benzodiazepine site ကိုမှာအဖြစ် High-ဆှဖှေဲ့ ligands အလုပ်လုပ်ကြသည်။
အဆိုပါ 4-Oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxamides န်းကျင် Pharmacomodulations
CB2သူတို့ကဒီအဲဒီ receptor ၏ physiopathological ဖြစ်စဉ်များစဉ်အတွင်းအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှကတည်းကအဲဒီ receptor ရွေးချယ် ligands လူကြိုက်အများဆုံးဆေးဝါးများတချို့ရှိနေပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, 4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxamides ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုထပ်မံသည်ဤအနကျအဓိပ်ပါယျ၏ဖွဲ့စည်းပုံမှာ-functionality နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာ-ဆှဖှေဲ့ဆက်ဆံရေး characterizing ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအတူပြုလေ၏။ ဘေးထွက်ကွင်းဆက်ရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအများအပြား keto နှင့် carboxamido substituents ဆောင်သောဒြပ်ပေါင်းများထုတ်လုပ်နေဖြင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ အဆိုပါ quinoline အလယ်ပိုင်းငြမ်း၏အခန်းကဏ္ဍကို, အခြားတစ်ဖက်တွင်အများအပြား 6-, 7-, ဒါမှမဟုတ် 8-chloro-4-oxo-1,4-dihydroquinolines, 4-oxo-1,4-dihydrocinnoline နှင့် 4-oxo- ထုတ်လုပ်နေဖြင့်လေ့လာခဲ့ခဲ့သည် 1,4-dihydronaphthyridine အနကျအဓိပ်ပါယျ။ အဆိုပါသမဝါယမမှာလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်ဆှဖှေဲ့ပေါ်ဤအကြောင်းပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းဖြင့်ယူဆောင်အကျိုးသက်ရောက်မှု2 အဲဒီ receptor သစ်ကိုရွေးချယ်သမဝါယမ၏စရိုက်လက္ခဏာတွေများအတွက်မှတ်တမ်းတင်ထားသောနှင့်ခွင့်ပြုခဲ့သည်2 အဲဒီ receptor ligands ။
မိုးသည်းထန်စွာ Atom အရေအတွက် 14
Monoisotopic Mass 189.043 g / mol
XLogP3-AA ကို 1.8
အတိအကျ Mass 189.043 g / mol
Topological အရောင်အသွေးစုံ Surface ကဧရိယာ 66.4 တစ် ^ 2
CACTVS Substructure Key ကိုလက်ဗွေ AAADcYByMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
မော်လီကျူးအလေးချိန် 189.17 g / mol
4-Hydroxyquinoline-3-carboxylic အက်ဆစ် (13721-01-2) Synthesis
[-piperzin-1-yl 7- (4 dimethoxy-pyrimidin-2,6-yl-diazenyl)] -2-fluoro-1-oxo-6-dihydro-quinoline-4- 1,4-cyclopropyl-3- တစ်စီးရီး synthesise မှ carboxylic အက်ဆစ်နှင့် 1-cyclopropyl-7- [4- (2,6-dimethyl-pyrimidin-2-yl-diazenyl) -piperzin-1-yl] -6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-quinoline-3-carboxylic အက်ဆစ်နှင့်၎င်းတို့၏ Dion အနကျအဓိပ်ပါယျနှင့်၎င်းတို့၏ antibacterial လှုပ်ရှားမှုများများအတွက်အကဲဖြတ်။
1-cyclopropyl-7- [4- (2,6 dimethoxy-pyrimidin-2-yl-diazenyl) -piperzin-1-yl] -6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-quinoline-3- carboxylic အက်ဆစ်၏တစ်ဦးကစီးရီး နှင့် 1-cyclopropyl-7- [4- (2,6-dimethyl-pyrimidin-2-yl-diazenyl) -piperzin-1-yl] -6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-quinoline-3-carboxylic အက်ဆစ်နှင့် သူတို့ရဲ့ Dion အနကျအဓိပ်ပါယျအလယ်အလတ်အထွက်နှုန်းအတွက်ဖန်တီးနဲ့မှာ IR, 1H NMR ဖြာထွက်ရောင်ခြည်အလင်းတန်းများနှင့်ကို elemental ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဓာတုဒြပ်ပေါင်းများကိုသမားရိုးကျ agar-dilution နည်းလမ်းကိုသုံးပြီးအချို့ Gram-အနုတ်လက္ခဏာနှင့် Gram-အပြုသဘောဘက်တီးရီးယားဆန့်ကျင်သူတို့၏ In-စသည်တို့ antibacterial လှုပ်ရှားမှုများများအတွက်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
1. item သတ်မှတ်ခြင်း
အမည်: 4-Dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic အက်ဆစ်
2. ဘေး၏ identification
ဘေး၏ပါဝင်ပစ္စည်းများ: 4-Oxo-1, 4-dihydroquinoline-3-carboxylic အက်ဆစ်
သဘာဝဘေးထုတ်ပြန်ကြေညာချက် (s) ကို
ကြိုတင်ကာကွယ်မှုကြေညာချက် (s) ကို
အမည်: 1, 4-DIHYDRO-4-OXO-QUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACID
သင်္ဘောအမည်: တင်ပို့ဘို့ Non-အန္တရာယ်ရှိသော class
ဖက်ဒရယ်အားဖြင့်ဖော်ပြထားကဲ့သို့သောအခြားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုစောငျ့ရှောကျ: တစ်ကမီးလောင်ပေါက်ကွဲလွယ်တဲ့အရည်ပျော်ပစ္စည်းနှင့်အတူဒြပ်ပေါင်းများပျော်နှင့် burner နဲ့ scrubber နှစ်ဦးစလုံးရှိတယ်တဲ့စညျးမဉျြးစညျးကမျးဓာတုမီးရှို့ဖျက်ဆီးကိုအသုံးပြုပါ။ ဖက်ဒရယ်, ပြည်နယ်နှင့်ဒေသဆိုင်ရာအာဏာကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာပါ။
7. Toxicological အသေးစိတ်
acute သက်ရောက်မှု: အထက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနှင့်စားသုံးမိပါထိခိုက်စေသည်ဟု Irritable ။
မျက်စိဆက်သွယ်ပါ: အ element တွေကိုသေချာစစ်ဆေးအဆိုပါမျက်ကပ်မှန်နှင့်အဆက်အသွယ်ရကြပါဘူး။ အမှု၌, နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သန့်ရှင်းသောရေနှင့်အတူသင်၏မျက်စိသုတ်တွေ့ကြုံတတ်၏။ ဖွင့်မျက်စိသိမ်းဆည်းထားပါနှင့်ချက်ချင်းဆေးကုသရှာကြာလော့။
အသားအရေကိုဆက်သွယ်ရန်ဤအန္တရာယ်ရှိသော element တွေကိုအရေပြားနှင့်အဆက်အသွယ်သို့အရအမှု၌, nonabrasive ဆပ်ပြာသုံးပြီးညင်ညင်သာသာပိုပြီးရေနှင့်ဆေးကြောပါ။ ပျော့ပျောင်းစေရန်သုတ်နှင့်အတူဧရိယာကိုဖုံးလွှမ်းနှင့်သင့်အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်တွေနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
ရှူရှိုက်မိခြင်း: အဧရိယာထဲကထိခိုက်နစ်နာလူတစ်ဦး Get နှင့်သူသို့မဟုတ်သူမအသက်ရှူပြဿနာရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိစ္စတွင်အောက်စီဂျင်စီမံခန့်ခွဲ။ ဆေးဝါးအဘို့သင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
စားသုံးမိပါ: သူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏ရေကိုသောက်နှင့်ဆေးဝါးအကူအညီကိုရှာရမယ့်အစားသားကောင်မှအန် inducing ရှောင်ကြဉ်ပါ။
9. တည်ငြိမ်မှုနှင့် reactivity
10 ။ ကိုင်တွယ်နှင့်သိုလှောင်မှု
11 ။ ထိတွေ့မှုထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး
12 ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဓာတု Properties ကို
13 ။ တည်ငြိမ်မှုနှင့် reactivity
ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူများကထိုကဲ့သို့သောဘဝကသိပ္ပံ, ပစ္စည်းသိပ္ပံ, ဓာတု Synthesis, Chromatography, Analytical နှင့်အခြားသောအဖြစ်သုတေသနနယ်ပယ်များတွင်အတွေ့အကြုံရှိသည်။
1, 2-Dihydro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic အက်ဆစ် (13721-01-2) အစုလိုက်အမိန့်နှင့်စျေးနှုန်း:
သင့်ရဲ့ဖန်တီးမှု, ဖွံ့ဖြိုးရေးသို့မဟုတ်သုတေသနအတွက်ကြီးမားသောသို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့ပမာဏ၏လိုအပ်ချက်အတွက်? အမိန့်နေရာယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်စောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့ကဖွင့်ဆက်သွယ်ပါ။
Baughman, ခ et al .: ACS ။ Chem ။ ။ Biol, 7, 526 (2012); Gaurav, အေ et al .: Medicine ။ Chem ။ res, 20, 192 (2011) ။ ;
Seongil Kang, Subin ပန်းခြံ, Kyung-su ကင် Changsik သီချင်းနှင့် Yunmi Lee က: အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒ 2018 83 (5) ၏ဂျာနယ်, 2694-2705
Banerji, Biswadip; ဓာတုဆက်သွယ်ရေး (ကိန်းဘရစ်, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း) 2005, (43), P5438-5440